Soomaaliya, 26 November 2018
Isniin 26 November 2018
8 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan 8 qof, ayaa ku geeriyootay 15 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waraysi khaas ah: Beyle oo beeniyey eedaha musuq-maasuqa
Qarax dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay Gaalkacyo
Ugu yaraan, 14 qof ayaa ku geeiryootay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax iyo weerar lagu qaaday xarunta Sheekh Cabdi Weli Sheekh Cali Cilmi Yare, oo ka mid ahaa culimada Suufida.
NUSOJ oo eedeysay dowladda Soomaaliya
Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSUJ, ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay cabburiso isla markaana laaluushto saxaafadda Soomaaliya.
Ka hortagga Xadgudubka Jinsiga oo laga Dooday
Olole sannadle ah oo soconaya 16-maalmood oo lagaga horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ayaa maanta ku bilowday Soomaaliya, waxaana ololuhu kusoo beegmay maalinta Qaramada Midoobay u astaysay ciribtirka xadgudubyada jinsiga ku salaysan.
Warbixin: Doodda Miisaaniyadda Somalia
Dhanka kale siyaasiyiinta qaar ayaa ka digaya saameynta ay yeelan karto Xildhibaanada xukuumadana ku jira oo ay sheegeen in ay adkeyneyso in xukuumada lala xisaabtamo.
10 Askari oo ku Dhintay Shabeellaha Dhexe
10 ka tirsan askarta dowladda Somalia ayaa lagu dilay duleedka degmada Balcad ee Gobalka Shabellaha dhexe, ka dib markii ay wadada u galeen kooxda Alshabab kolonyo ciidan oo marayay inta u dhaxeysa Degaanada Qalimow iyo Gololey.
Md. Biixi oo Booqday Tukarraq
Muuse Biixi, madaxweynaha Somaliland oo safar ku jooga gobollada bariga Somaliland ayaa maanta tagay deegaanka Tukarraq, halkaasi oo isku hor-fadhiyaan ciidamo ka tirsan Somaliland iyo Puntland oo dhowr jeer halkaasi dagaal ku dhexmaray.
Barn. Dhacdooyinka ee tooddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo ay ku jirto xaalka doorashada madaxtinimo ee Koonfur-galbeed, Somalia, waxaana barnaamijka soo jeedinaya
Wareysi: Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
Safiirka Mareykanka u joogo Somalia, Donald Yamamoto, ayaa Wareysi gaar ah oo uu siiyey Laanta Afka Somaliga ee VOA uga hadlay arrimo badan.
Duqaymaha Maraykanka ee Soomaaliya oo kordhay
Dawladda Maraykanka ayaa si weyn kor ugu qaadday weerarrada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya.